पूर्वसचिव कार्की पत्नीको ह,त्याः बहिरियो यस्तो ‘पो,स्टमा,र्टम रिपोर्ट! के छ रिपाेर्टमा? हेर्नुस् भिडियो – PathivaraOnline
Home > अपराध > पूर्वसचिव कार्की पत्नीको ह,त्याः बहिरियो यस्तो ‘पो,स्टमा,र्टम रिपोर्ट! के छ रिपाेर्टमा? हेर्नुस् भिडियो
admin February 11, 2020 अपराध, भिडियो, समाज	0
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती ४९ वर्षीया मुना कार्कीको घरमा काम गर्न राखिएका सहयोगीबाट घरभित्रै ह त्या भएको छ।१२ वर्षदेखि घरेलु कामदार बसेका दाङ लमहीका विजय चौधरीले कार्कीको ह-त्या गरेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । २२ वर्षीय चौधरी पनि सँगै मृ” त भेटिएका छन् ।सानेपास्थित कार्की निवासको डाइनिङ हलमा सोमबार बिहान दुवैको श व भेटिएको हो । कार्कीको श व टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र अनुहार कपालले छोपिएको अवस्थामा थियो ।
चौधरीको घाँ”टीमा पा-सो लागेको र डो-री चुँ-डिएको अवस्थामा थियो । आधा डोरी उनी ढलेको ठीक माथि भर्याङको रेलिङमा झु”न्डि’एको थियो ।अनुसन्धानमा संलग्न अ’पराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी मुकेशकुमार सिंहले कार्कीको ह’त्या चौधरीले नै गरेको पुष्टि भएको बताए । ‘हामीले सिसिक्यामेरा फुटेज अध्ययन गयौँ । फुटेज अध्ययन गर्दा कार्कीको ह ”त्या चौधरीले नै गरेको देखिन्छ, कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ एसपी सिंहले भने, ‘तर, घटनाको कारण बुझ्न सकिएको छैन । हामी अध्ययन गर्दै छौँ।’
सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले आर्थिक, यौ’न, ला’गुऔ’षध र मनोवैज्ञानिक कारण घरेलु कामदारबाटै ह”’त्याका घटना हुने गरेको बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेको समाचार अनुसार कार्कीको ब” लात्कारपछि ह ”’त्या भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ।प्रहरीका अनुसार घ’टनास्थल मुचुल्काका क्रममा चौधरीको अन्डरवेयरभित्र वी””र्यजस्तै देखिने चिप्लो प”’दार्थ भेटिएको छ । अन्डरवेयरको केही भागमा र”’गत लागेको पनि देखिएको छ ।
मृ”’तक कार्कीको मासिक चक्रकै वेला रहेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।‘चौधरीको अन्डरवेयरमा शं’का’स्पद वस्तु फेला परेका छन् । तर, परीक्षण हुन सकेको छैन,’ महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सिंहले भने, ‘झु* न्डिएको मान्छेको शरीरको कुनै अंगबाट त’रल प’दार्थ निस्किनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ । त्यसैले थप अनुसन्धान आवश्यक छ।’
प्राप्त सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा चौधरीले मुनालाई किचेनमा काम गरिरहेका बेला पछाडिबाट डोरीले घाँ टी न्याँ केका थिए। त्यसपछि करिब १३ मिनेट चौधरीले के गरे भन्ने सिसिटिभी फुटेजमा देखिँदैन।१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टाउकोमा केही चिजले सातपटक हि””र्काएको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी
घटनास्थलमै ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। सिसिटिभी फुटेजअनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ।११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु”न्डि”एको अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा ल’डिर’हेकी थिइन्।१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ”टीमा डो”रीले न्याँ”केर लडाउनुअघि पनि किचेनबाहिर चौधरी ओहोरदोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ।
१० बर्षसम्मकाे प्रेममा धोका खाएपछि सुनसरीका यी युवकले भावुक स्टाटस लेख्दै सप्तकोशीमा हा,मफा,ले!
रबी दाई मलाई तपाईंको जस्तो जोश दिनुहोस ‘मेरो देश फर्कन चाहन्छु’ : भिडियो हेर्नुहाेस्
सधै युवतीका कारण चर्चामा आइरहने पारस केटीसँग जंगल चाहार्दै, को हुन् नयाँ यूवती ?